China umatshini ozenzekelayo ohamba ngesantya esiphakamileyo kumatshini mveliso kunye nabathengisi Sunkia
Ukutya kwephepha kwamkela uhlobo lwamva nje lokutya okuphezulu; Iphepha lokufunxa elizinzileyo, ingxolo ephantsi; Itreyi enye yentsimbi epakisha iphepha-inqwelo isindisa abantu kunye nexesha lokufaka iphepha, ukusebenza kakuhle kuphuculwe; uhlobo lokuhambisa umphakeli-ulondolozo kunye nendawo yokucoca ibanzi kwaye ilungele.
Feed Ukutya kwephepha kwamkela uhlobo lwamva nje lokutya okuphezulu; Iphepha lokufunxa elizinzileyo, ingxolo ephantsi; Itreyi enye yentsimbi epakisha iphepha-inqwelo isindisa abantu kunye nexesha lokufaka iphepha, ukusebenza kakuhle kuphuculwe; uhlobo lokuhambisa umphakeli-ulondolozo kunye nendawo yokucoca ibanzi kwaye ilungele.
Wheel Ivili lokufudumeza laphula isithethe kwaye lisebenzisa iwelding ephezulu yokushisa ukuze kulungiswe ulungelelwaniso olukhethekileyo lwegesi, umphunga, ubushushu bombane ngaphandle kokudodobala, okunokuphucula umgangatho wemveliso kunye nokusebenza kakuhle.
♦ Iliso lombane lokumisa kwisitya sensimbi, sebenzisa iliso lombane elikude elikude elingeniswa elizweni, thintela iliso lombane ekuvezeni ubushushu obuphezulu, kwaye wandise ubomi benkonzo.
Ukuhanjiswa kwephepha kwamkela ulungelelwaniso lwamaphepha amacala amathathu, uxinzelelo lomoya wesekethe-isandi esisezantsi, inqanaba lokungaphumeleli okuphantsi, ukutshintsha iphepha ngokulula, isampulu yasimahla ngexesha lokusebenza, yimveliso entsha ephumelele amalungelo awodwa omenzi wechiza.
Imfuneko yoMbane (KW)
58kw (Uhlobo lokufudumeza ngombane), 15kw (SUhlobo lweqela)
60kw (Uhlobo lokufudumeza ngombane), 15kw (Uhlobo lomphunga)
Ubungakanani boomatshini (L * W * H) mm
Egqithileyo Isantya esiphakamileyo soMatshini wokuLaminetha ngemela ephaphazelayo (iglu esekwe emanzini / iglu enamafutha / ifilimu esele yenziwe ngaphambili)
Okulandelayo: Ukuhambisa ngokuzenzekelayo ukuSonga umatshini wokuLaminetha
Zenzekelayo umatshini grooving